Ny divay | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ny divay
Ahoana no fomba hanamboarana champagne homemade avy amin'ny ravina voaloboka
Araka ny eritreritry ny champagne, maro ireo olona manatsara ny toetrany. Heverina ho fisotroana vehivavy izany, fa ny lehilahy ihany no misotro azy amin'ny fahafinaretana. Izahay dia zatra amin'ny zava-misy fa ity trondro ity dia azo hita ao anaty fivarotana ary izany dia natao irery avy amin'ny ranom-boaloboka na divay. Hitanao fa afaka manamboatra champagne ao an-trano avy amin'ireo singa tena tsotra ianao, ny ankamaroany dia ny ravina voaloboka.
Inona no ilainao ary ahoana no hamahanao ny divay any an-trano
Ny divay homemade, avy amin'ny zavatra rehetra vita, dia tokony hapetraka. Ity dingana ity dia hanampy amin'ny fanamafisana ny tsirony bebe kokoa ary hihazona ny fisotro mandritra ny fotoana lava. Ny fomba fitsaboana dia tsotra: mila karazana fofona, alikaola na tingra ary siramamy. Inona no tokony hatao ary inona no teknolojia mifamatotra - ho hitantsika bebe kokoa. Nahoana ianao no mila manamboatra ny divay?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny divay